लोकतन्त्र दिवसमा सम्मान, पीडितको सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप ः बडु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ बैशाख १२, शुक्रबार ०१:०१ गते
नारायणगढ । लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार चितवनमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेस चितवनले जिल्लाबाट संविधानसभामा निर्वाचित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सभासद्हरुलाई सम्मान गरेको छ ।
‘२०७१ साल लोकतान्त्रिक संविधान र संमृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले आफ्ना सभासदहरुलाई सम्मान गरेको हो । प्रत्यक्षतर्फ चितवन क्षेत्र नं. दुईबाट निर्वाचित शेषनाथ अधिकारी, समानुपातिक सभासद अन्जनी श्रेष्ठ, सावित्री चौधरी र विष्णुमाया परियारलाई कांग्रेसले सम्मान गरेको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सशस्त्र संघर्षकालका घटनामा मेलमिलाप नै प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । उनले मेलमिलाप गर्दा सत्य के हो त्यो पूर्ण जानकारी दिने र पीडितको सन्तुष्टि र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप गर्ने पनि बताए । विगतका घटना त्यसै बिर्सन नमिल्ने हुँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितका कुरा सुनेर मेलमिलापमार्फत सहकार्य स्थापना गर्न खोजेको बडुको भनाइ छ ।
मेलमिलाप आयोग गठनका लागि बन्न लागेको कानुनका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको र सुधार आवश्यक परेको खण्डमा संसदले त्यसलाई सुधार्ने उनले बताए । विभिन्न दलहरुबाट सुधारका बुँदाहरु पनि आएकाले मेलमिलाप आयोग सबल बन्ने उनको भनाइ थियो ।
वर्तमान सरकारको प्राथमिकता माघ आठमा संविधान जारी गर्नु रहेकाले कार्यकर्ता र सर्वसाधरणको अपेक्षा पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । यो अवधिमा विकास निर्माणका माग नगर्ने उनले बताए । संविधान निर्माणपछि संसदबाट विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएकाले त्यो बेलासम्म धैर्य गर्न उनले आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको बाघ र बाख्राले एकै ठाउँ पानी खान सक्ने वातावरण तयार गर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए । कानुन र विधिको शासनले सवैलाई नियममा बस्न बाध्य पार्ने र कसैले कसैमाथि अत्याचार गर्न नसक्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा मात्रै हुने उनले बताए ।
सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता खोजविन आयोग गठन शान्ति स्थापनाको महत्वपूर्ण पाटो भएको उनले बताए । विद्रोही पक्षको सेनालाई समायोजन गर्ने गहन काम सकिए पनि त्यही मात्रै कार्यले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भनेर भन्न नमिल्ने बडुको तर्क थियो ।
विगतमा हतियारधारी शक्तिको हतियार व्यवस्थापन नहुँदा निर्वाचन भएकाले संविधान निर्माणमा बाधा व्यवधानहरु आएको बडुले बताए । योपटक लोकतान्त्रिक शक्ति काँग्रेस नेतृत्वमा रहेकाले र हतियारसमेत व्यवस्थापन भएकाले कसैमा दम्भ र अहंकार नभएको हुँदा समयमै संविधान बन्ने उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली काग्रेस चितवनका पूर्व सभापतिहरु रामकृष्ण घिमिरे, कृष्णलाल सापकोटा, तोपमानसिह गुरुङ, पृथ्वीमान गुरुङ, टिकाराम न्यौपाने, कृषि तथा वन विश्व विद्यालयका रजिष्टार डा. सूर्यकान्त घिमिरे, प्रकाश अधिकारी, डा. भक्तमान श्रेष्ठ, वेलवहादुर गुरुङ,केशव भक्त सापकोटा, हरि पोख्रेल, सहनलाल प्रधान, सुवोध प्रधान, जगन्नाथ थपलिया, नारायण दाहाल, गुणराज लोहोनी, वद्रीप्रसाद तिमिल्सिना, रामहरी कंडेल, मोहनमणि ढकाल लगाएतले वोल्नु भएको थियो ।
बोल्ने नेताहरुले देशमा जनताले सोचे अनुरुपको परिवर्तन अझै हासिल नभएको हुँदा पार्टीले जनअपेक्षा पूरा गर्न अझै गतिवान भएर काम गर्न आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए ।